Umaki: I-SnapEngage | Martech Zone
Lwesine, Disemba 7, 2017 Lwesine, Disemba 7, 2017 Douglas Karr
Sixoxe ngezinzuzo eziningi zokuhlanganisa ingxoxo ebukhoma kuwebhusayithi yakho kwenye yama-podcast wethu wokumaketha. Qiniseka ukuthi uvula! Ingxoxo ebukhoma iyamangaza ngoba izibalo zinikeza ubufakazi bokuthi azikwazi ukusiza kuphela ukuvala ibhizinisi eliningi, futhi zingathuthukisa nokwaneliseka kwamakhasimende kule nqubo. Amakhasimende afuna usizo kepha, ngombono wami, awafuni ukukhuluma nabantu. Ukushaya, ukuzula ezihlahleni zefoni, ukulinda ubambe, bese uchaza